Ny andraikitray sy ny soatoavinay | Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar
Mandray anjara amin’ny fampandrosoana maharitra ny mahaolona amin’ny alalan’ny fikajiana/fiarovana sy fampanjariana (fanomezan-danja/fanomezan-kasina) ny harem-boajanahary/karazan-javaboary miainga amin’ny fanetsehana famatsiam-bola azo antoka/maharitra ho an’ny rafi-pifehezana ireo faritra arovana eto Madagasikara.
Mitondra vahaolana famatsiambola maharitra ny fanorenana (fondation) ho fiarovana ireo harena voajanahary (karazana) sy ny fonenana ara-boajanahary ary maniry ny hanohana ny ampahatelon’ny filana ara-bolan’ny SAPM hatramin’ny taona 2021.
Ho tanterakaio tanjona io raha mifanampy isika. Mandraisa anjara amin’ny fiarovana ny karazan-javaboarin’i Madagasikara.
Miasa isan’andro izahay ato amin’ny FAPBM ho fiarovana ny karazan-javaboary ananan’ny nosintsika ary iainanay tanteraka izany filamatra izany:
- Fitiavana manokana ny natiora : miraiki-po tanteraka amin’ny harenjavaboahary tsy roa amantany ananan’i Madagasikara izahay ary miasa ho fiarovana azy.
- Lanja sy tamberin’andraikitra : miasa izahay ho fihazonana ny fifandrohizan’ny tontolo iainana ambamin’ny ambamin’ny lanjan’izany anatin’io sehatra io ary koa ny mahasoa ny olombelona. Mahatsapa ho mananana andraikitra akory aza anefa izahay na amin’ireo mpandray anjara nametraka aminay ny fitokisany na amin’ireo mpiray tanindrazana.
- Mendrika sy tanteraka : mikatsaka tsy tapaka ny akon’ny famatsiambola amin’ny karazan-javaboary sy ny vahoaka eny ifotony amin’ny hetsika ataonay izahay
- Fifikirana amin’ny soatoavina nentimpaharazana sy ny fifampiresahana ary ny fisokafana : Ny lanja manokana omenay ny fahalalàna nentimpaharazana no mitarika anay hanangana kolontsain’ny fifampiresahana amin’ireo mpamatsy vola sy ny mpiara-miombon’antoka ary ny mponina.